Musharrixiinta guddoonka golaha shacabka oo maanta soo gebagabeynaya hadal u jeedinta xildhibaannada – Kalfadhi
Musharrixiinta u tartameysa xilka afhayeenka golaha shacabka ayaa maanta soo gebagabeynaya qudbaddahooda musharraxnimo ee ay ka hor jeedinayan xildhibaannada golaha si ay uga codka kalsoonida.
Shan musharrax oo uu ku jiro Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta qudbaddo ka jeedin doona golaha ka hor inta uusan guddiga qaban qabaada doorashada ku dhawaaqin in la soo xiray hadal jeedinta musharrixiinta.
Lix musharrax ayaa shalay golaha shacabka ka jeediyay qudbaddo ay ka muuqden ballan qaadyo badan oo la xiriira horumarinta howlaha golaha iyo dib u dhiska dhismaha golaha shacabka oo aad u burbursan.
Dowladda Turkiga ayaa hore ula saxiixatay golaha horaantii sanadkan heshiis ay ku dhiseyso dhismaha xarunta golaha shacabka.
Guddiga qaban qaabada doorashada golaha waxa uu Jimcaha,Sabtida iyo Axada ku mashquuli doonnaa abaabulka doorashada guddoonka golaha oo ku began maalinta Isniinta ee 30-ka bishan Abriil.